Coronavirus: "Qalabkan ka fogow si internet-kaaga uu xawaare u yeesho" - BBC News Somali
Waaxda maamulka warbaahinta ee shirkadda lagu magacaabo Ofcom ayaa dadka kula talisay inay ka fogaadaan isticmaalka qalabka cuntada lagu kululeysto ee microwave-ka, marka ay isticmaalayaan wifi-ga, tan oo qeyb ka ah talooyinka ku saabsan sare u qaadidda xawaaraha internet-ka.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo malaayiin qof ay ka shaqeynayaan guryaha, oo qaarkoodna aysan haysan internet fiican, ka dib markii dowladdaha qaar ee caalamka ay shacabokooda ku amreen in ay guryaha ka soo shaqeeyaan.
Waxay tani cadaadis saartay shirkadaha internet-ka, iyadoo boqolkiiba 20% ay korortay isticmaalka internet-ka.
Dowladdaha qaar ee daafaha dunida, sida Britain, ayaa dalbanaya in la helo internet xawaare leh oo la isku halayn karo, maadaama ay dad badan guryaha ka soo shaqeynayaan xilliga lagu jiro la dagaallanka fayraska corona.
Talada Ofcom waxaa qeyb ka ah in qofku uu sii dejisto aflaamta, intii uu toos u daawan lahaa isagoo sidoo kale doonayo inuu qof muuqaal ka waco.
"Ma ogtahay in microwave-ka cuntada lagu kululeysto uu yareyn karo xawaaraha internet-ka wifi-ga?," ayay Ofcom tiri.
"Sidaas darteed ha isticmaalin microwave-ka marka aad wicitaan muuqaal ah sameyneyso, ama marka aad daawaneyso muuqaallo HD ah amaba aad howl muhiim ah ka haysato online-ka."
Qalabka internet-ka waxaad saartaa meel ka fog qalabyada kale ee saameynta ku yeelan kara, sida miis dushiisa amaba armaajada korkeeda intii aad dhulka dhigi lahay
Mar walba ha daarnaado qalabka internet-ka
Haddii aad sameyneyso wicitaan muuqaal ah amaba aad shirar galeyso, waa inaad iska demiso muuqaalada kale oo aad keliya maqal isticmaasho ayaa kaa caawin kara internet fiican inaad hesho
Haddii aad dooneyso internet xawaare sare leh, isticmaal xarigga ethernet oo toos internet-ka ugu xiriirinaya kumbuyuutarkaaga intii aad isticmaali lahayd wifi-ga
Qalabyada saameynta ku yeelan kara internet-ka waxaa ka mid ah: telefoonnada gacanta, qalabka carruurta lagu ilaaliyo, nalalka qaar, sameecadaha kumbiyuutarrada iyo TV-yada.
Ofcom ayaa dadka kula talineysa inay isticmaalaan telefoonnada landline-ka haddii ay suurtagal tahay.
"Haddii aad dooneyso inaad isticmaasho telefoonkaaga gacanta, isku day inaad ka damiso wifi-ga," ayay tiri Ofcom.
"Si la mid ah, waxaad wicitaanno muuqaal ka sameyn kartaa app-yada sida Facetime, Skype ama WhatsApp."
Waxay waaxdu sidoo kale ku talineysaa in la damiyo qalabyada aan la isticmaaleynin.
Ofcom ma ahan ururka keliya ee qaadaya tallaabooyinka sare loogu qaadayo xawaaraha internet-ka inta lagu guda jiro xilligan xayiraadda.
Shirkadaha Facebook, Netflix, Disney+ iyo YouTube ayaa yareeyay tayada muuqaallada si loo yareeyo cadaadiska saaran shirkadaha internet-ka.
Balse shirkadaha internet-ka ayaa sheegay inay xakameyn karaan cadaadiska.da.